“Dide!” jedhe Oromoon. – Welcome to bilisummaa
“Dide!” jedhe Oromoon.
bilisummaa October 14, 2017	Leave a comment
Baarentuu Gadaa tiin.
Har’a duulli nurratti banamee jira. Duula kaabaa kibbaan, bahaa lixaan nurratti baname kanamoo kangaggeessaa jiru wayyaanee dha. Wayyaaneen waggoota 26n darbaniif Oromoorratti falfaluu dhiiftee hin beektu. Kan waggoota sadan darbanii ammoo adda.
Barri-baranaa ammoo, bara Wayyaaneen duula xumuraa ummata Oromoorratti labsiteedha jechuutu danda’ama. Aga’aaziin waggoottan darbaniif keessumaa ammoo birraa darbe maqaalabsii yeroo muddamaatiin ummata Oromootti bobba’ee ajjeechaa, hidhaafi dararaa raawwataa ture. Maqaadhaaf labsiin yeroo muddamaa sun ka’us yakka waraanni sirnichaa ummata Oromoorratti raawwatu hin dhaabbanne.
Kun hunduu akka yaaddeetti bu’aa fiduufii didee, qabsoon Oromoon bilisummaa isaaf taasisu akka daran itti cimu taasise. Aarii kana irraa wayyaaneen kunoo akkuma addunyaan quba qabutti saboota biraa hidhachiiftee ummata Oromoorratti duula labsitee jirti.
Gama baha, kibba bahaa fi kibbaan sumaaloota bor hin beekne garaaf bultoota qaadimtee, leenjiftee, hidhachiiftee Oromootti bobbaafte. Liyyuu hayiliin sumaalee ajaja qondaalota waraanaa wayyaanee irraa fudhatu kunis yeroo ammaa kana kan ajjeese ajjeesee kaan bakka buutee dhabamsiisee ummata Oromoo kuma dhibbaan lakka’amu saamee, qayee fi qabeenyarraa buqqisee balaa gurguddaaf saaxilaeera.
Ajjeechaa, hidhaa, dararaa fi saamicha akksumas qayee fi qabeenyarraa Oromoo buqqisuudhaan qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo ABO jalatti gurmaa’ee taasisu dhaabuu kan hin danda’in wayyaaneen, gama baha fi kibba baha Oromiyaatiin waan raawwatte raawwattee dura dhaabbannoo guddaan ummata Oromoorraa ishii muudannaan ammoo kallattii ishii gama lixa oromoiyaatti jijjirtee duula biraa ummata Oromoo irratti labsitee
ibidda biraa qabsiisuuf shurshuraa jirti. Akkuma baha, kibba bahaa fi kibbaan liyyuu hayilii sumaalee ummata Oromootti dulchiiftee jiraattoota naannichaa kuma dhibbootaan qayee fi qabeenyarraa buqqiftee, saamaa fi fixaa turtee fi jirtu lixa Oromiyaattin ammoo adda waraanaa biraa bantee ummata Oromoo dhumaatii fi buqqa’iinsa biraaf saaxiluuf darbees qabsoo isaa; FXG irraa akka dagamu taasisuuf dibbee waldhabbii fi lolaa dhaanaa jirti.
Tibba kana Oduun guyyuu dhagahamaa jiru akka ifa taasisutti Wayyaaneen asii fi achiin meeshaa waraanaa heddumminaan gama lixa Oromiyaatti guuraa jirti. Meeshaa kanas garaaf bultoota boru hin beekne Gumzi keessaa filattee leenjisaa turte hidhachiisaa jirti.
Garaaf bultoonni Gumzirraa Oromootti duulanii ajjeechaa, saamichaa fi dararaa raawwatan kanaan duras kan irra deddeebidhaan yakka walfakkaataa raawwachaa turan ta’us kan ammaa adda kan jedhan maddeen naannichaa duulli yeroo ammaa kun itti fufa duula gama baha Oromiyaatti gaggeeffamee ummanni Oromoo ciminaan ofirraa qolachaa jiruu waan ta’eef, isa kanas haaluma walfakkaatuun irree tokkoon ofirraa qolachuun barbaachisaa ta’uu akeekanii gochi wayyaanee kun ummata Oromoo qabsoo bilisummaa hadhoofturra jiru karaa kamiinuu akka daguu hin dandeenye jala muru.
Eeyyee yakki wayyaanee kun qabsoo Oromoon bilisummaa isaaf taasisu daguus, dhaabus hin danda’u.
Uummanni Oromoo uummata du’a, hidhaa fi dararaa sodaatee qabsoo isaarraa duubatti jedhu akka hin taane waggoonni 26n darban keessumaa FXGn waggoota 3n darbanii eenyufuu ragaa baheera. Wayaaneen karaa
hedduun Oromoo tuttuqxee ilaaltee jirti, Aga’aaziin itti bobba’ee yaalee jira, garaaf bultoonni Liyyuu hayilii sumaalees ajjeechaa dabalatee yakkoota danuu raawwateera. Oromoon garuu caalaatti alaa manaa harka walqabatee qabsoo bilisummaa isaa ABOn durfamu jabeessee itti fufe malee duubatti hin jenne, ykn hin seesofne. Deemsi amma wayyaaneen Gumzoota garaaf bulan gama lixa Oromiyaatin hidhachiiftee Oromootti duulchisuuf carraaqaa jirtuus gama kamiinuu waan milkaawuumiti.
Duullii kun qaamuma duula wayyaanee gama bahaa, kibba bahaa fi kibbaa ta’us ummanni Oromoo akka dhufaatii isaatti ofirraa hanqisuuf tattaafachaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Wayyaaneen Oromoo ollaan waldhabsiiftee tasgabbii dhorkitee qabsoo bilisummaa isaarraa daguun toftaa fi tarsiimoo godhattee duula ijibbaatarra jirti. Kun akka hin milkoofne ammoo caalaatti irratti dalaguun dirqama Oromoo maraati.
Uummanni Oromoo akkuma kanaan dura duula sirnoota bittoota Habashaa kamiifuu tole jedhee yakka isaaniitiif jilbiifatee hin beekne duula Wayyaaneen amma itti jirtu kanaafis akka hin jilbiifanne eenyufuu ifa
galaa dha. Akkuma argaa fi dhagahaa jirruttis Oromoon kan yeroo kamiituu caalaa alaa manatti harka walqabatee diina isaa dura dhaabbatee falmaa jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamu gama
hundaan deeggaraa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan gaggeeffamu kunis sadarkaa abdachiisaa fi murteessarra gaheera.
Hara’a FXG gutummaa Oromiyaa keessatti Finiinaa jira. Amboo, Walisoo, Hargee Bahaa Fi Lixaa Magaaloota Baayyee, Shaashamannee, Boorana Mooyaalee dabaltee Mgaalaa Hedduu keessatti, Lixa Oromiyaa akkasuma
Magaalaa danuu keessatti qeerroon diina hundeen buqqisee gatuuf sochii cimaarra jira. Wayyaaneenis dhugaa kana kan hubatte ta’uu ishii sochii itti jirtu irraa salphaatti hubachuutu danda’ama. Ajjeechaa, dararaa fi saamicha cimsitee jirti. Garuu Uummanni dinnaan dideedha waan ta’eef FXG finiinaa jiru dhaabuu hin dandeenye!
Mootummaan abbaa irree tokkoo yoo dhiphatu, yoo soda keessa seenu, yoo kufaatitti dhihaatu akkuma amma wayyaaneen taatu kana ta’a. Waanuma amma wayyaaneen ummata Oromoorratti dalagaa jirtu dalaga. Kanuma arge hunda ajjeesa, saboooota waliiti buusuuf tattaafata, yoo saboota dhabe sabuma tokko keessatti afan-fajjii uumuu yaala. Amantii fi amantii waldura dhaaba. Hidhaa dararaan hojii isaa guyyaa- guyyaa ta’a. Dhugaa
akkasii ammoo Dargii irratti argineerra, kan Liibiyaa bulchaa ture Gaadaafirrattis argineerra.
Abbootii irree danuus lakkaawuu dandeenya. Kan yeroo ammaa kana wayyaanee irratti argaa jirruu fi muldhachaa jirus kanuma. Qabsoon keenya, qabsoon Bilisummaa ABOn gaggeeffamu wayyaanee dhiphuu keessa seensiseera. Qeerroon, ummanni Oromoo bal’aan alaa manaa sochii taasisaa jiruun wayyaanee irratti injifannoo boonsaa galmeessisaa jira.
Har’a wayyaaneen jira jettee of dhaadheessitus jigaa jirti. Sobdee haa dhidhittattu malee diigamarra jirti. Miseensoonni OPDO, DHDN, BADN fi kanneen biroo hedduun sirna kana keessaa tokko tokkoon baqachaa jiru. kuun gara qabsoo bilisummaa saboonni cunqurfamoon gaggeessanitti makamaa jiru, kuun akka bahaniin alatti hafaa jiru.
Amma kan asii fi achitti dhidhiitachaa jiru wayyaanotaa fi ergamtoota muraasa. Isaan ammoo qabsoo keenya irree tokkoon eegalle jabeessinee itti fufuun xumura itti godhuun dirqama numara irraa eegamuu dha.
Wayyaaneen kan jirtu fakkaachuuf dhaadattus hin jirtu, kan hin jirre ta’uu ishii hubannee ammoo qabsoo keenya cimfachuun , caalaatti haraka walqabachuun kan yeroo kamiituu caalaa barbaachisaadha. Daandiin
bilisummaatti nubaasu qabsoo keenya cimfachuu, FXG eegalle daran itti jabeessuu qofa.
Isa alaa manatti, baadiyyaa magaalaatti, haa jabeeffannu!
Previous Concomitant therapy of OLF will abort the incogitable humilation against Oromo people
Next Qabsoon Isaa Boojihamuu Ummanni Hayyamuu Hin Qabu